Vakuru Zvirongwa - Utah Pride Center
SAGE inopa masevhisi uye zviwanikwa zvedunhu repamusoro reGBBTQ. SAGE ine mbiru ina dzenheyo uye nzvimbo shanu dzekutarisa dzinotsigira iyo mbiru yenheyo. Chirongwa chega chega, boka kana chiitiko chakagadzirwa nerutsigiro irworwo mupfungwa. SAGE inotsigira munhu wega wega kuti vagone kurarama kwavo kwakanyanya kwevakuru hupenyu.
Nharaunda dzekutarisa kutsigira mbiru
Zvekudyidzana (zviitiko, zviitiko, mashandiro, kuungana, kubuda, kufamba, network) Kushushikana (hukama, rudo, kuchengetedza, kutarisira)
Panyama (pekugara, hutano, kutakurwa, zvemari, hutano hwepabonde / kugara zvakanaka, kurovedza muviri)
Zvepamweya (kubatana, kuzviziva, kuvandudza, kuzvivhenekera, kugadzirisa-zvakare uye kuchinja)
Tinofara zuva rekuziva kweIntersex!
Senior Chirongwa Nhau
LGBTQ + Vakuru Vanochengeta Vanotsigira Boka
Kudya Kwevanhu Kwemasaga
SAGE Bhuku reClub
SAGE Chirairo Chikwata